I-WhatsApp ayikusebenzeli? Ayinguwe wedwa, I-WhatsApp iphantsi | Iindaba zeGajethi
Ukuba uvukile kutsha nje kwaye into yokuqala oyenzileyo kukujonga ukuba mingaphi imiyalezo onayo kumaqela e-WhatsApp okanye ubulindele intsasa elungileyo evela kwisihlobo, okanye impendulo kumyalezo wokugqibela owuthumele ngesi sicelo phezolo, usenokuba ujongile ukuba i-app ekhokelayo yemiyalezo iyekile njani ukusebenza ngoku, akukho ndlela yakuthumela imiyalezo ebhaliweyo, yelizwi okanye yevidiyo. Ngelishwa, i-WhatsApp yehla sele iyinto eqhelekileyo kwaye amaxesha ngamaxesha inkonzo iyeke ukusebenza esisinyanzela ukuba sibhenele kwiminxeba, kufuneka sigcine unxibelelwano ngandlela thile, okanye sibhenele kwezinye izicelo ezinje ngeTelegram.
Okwangoku kubonakala ngathi iqonga lokuthumela imiyalezo lisezantsi eYurophu, liyinxalenye yeTshayina neIndiya, emazantsi eAfrika neMalaysia. Ukuba ngalo lonke ixesha i-WhatsApp iyeka ukusebenza, uqala ukubandezeleka ngokubila ulinde umzuzu xa izakusebenza kwakhona, kuya kufuneka uyazi ukuba njengesiqhelo, U-WhatsApp akakhange axele ukuba kuya kuthatha ixesha elingakanani ukulungisa le ngxaki echaphazela izigidi ezininzi zabasebenzisi, abasebenzisi abenze olu setyenziso oluthandwayo xa benxibelelana phantse nomntu wonke.
Njengoko sibona kwi-Downdetector, elona nani liphezulu leengxaki zonxibelelwano ibikwi-9 kusasa, ixesha leSpanish, kodwa kwimizuzu yokugqibela inani leziganeko ezixeliweyo kule nkonzo zehle kakhulu, nangona kunjalo, inkonzo ayikasebenzi, ke kuyakufuneka siwele iminwe kwaye siyathemba ukuba bazokuyilungisa kungekudala. Isenokuba lelona xesha lilungileyo ukuqala ukuyisebenzisa kube kanye. Yocingo, yeyona ndlela ifanelekileyo esinokuyifumana ngoku kwintengiso.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » I-WhatsApp ayikusebenzeli? Ayinguwe wedwa, i-WhatsApp iphantsi